Amanzi Azolileyo- Indawo yePool ngasemanzini angasemva
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguNeetu
I-Tranquil Waters yindawo epholileyo esecaleni kwechibi enamagumbi okulala amabini abanzi, igumbi lokuhlala, iveranda, ikhitshi, idama lokudada kunye negadi. Yindawo yabucala yabo batshatayo okanye abo bafuna iholide engakhathaliyo, ebekwe isiqingatha seyure ukusuka eAlleppey, kufutshane neMuhamma. Yindawo efanelekileyo yokuphumla ngempelaveki kwaye wonwabele impepho kunye nokuzola kweLake laseVembanad.
Ipropathi ibonakalisa imbonakalo entle yeSiqithi sasePathiramanal kunye nechweba elijikelezileyo elineminatha yokuloba yaseTshayina. Iinduli zeWestern Ghats zinokujongwa kude. Eli chibi likhaya lezilwanyana zasekuhlaleni ezahlukahlukeneyo neentaka ezifudukayo.
Ukutya kwasekuseni kuyancomeka kwaye okunye ukutya (ukhetho olulinganiselweyo) kunokubonelelwa nge-Rs 550 ngentloko nganye ngesidlo ngasinye. Ukuba ukhethe isidlo sangokuhlwa uya kunikwa ukuya kuthi ga kwi-1900 Hrs kuphela
Ukubona indawo yendawo, ukuhamba ngesikhephe, iteksi kunokucwangciswa ngokwesicelo
Umbuki zindwendwe ngu- Neetu
Ndisenokungafumaneki emntwini kodwa ndizokwazi ukunceda naxa kufuneka
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Muhamma